GUBBISA MAQ-BAASA MAQAA DURAAN JIRU IRRAA….Kulaa Jiloo Xachee! – Beekan Guluma Erena
GUBBISA MAQ-BAASA MAQAA DURAAN JIRU IRRAA….Kulaa Jiloo Xachee!	Beekan Guluma Erena
Poems May 18, 2016OROMO
MAQ-BAASA MAQAA DURAAN JIRU IRRAA….
“Lubbuu qabeeyyiin seelii irraa ijaaraman; seeliin ammoo seelii duraan jirtu irraa dhufte.” falaasama jedhu lafa kaa’u qorattoonnii waa’ee saayinsii lubbuu. Uumannii oromoos falaasamoota maadee ta’an kan argannoo saayintiistootaa kanaa gadi hin taanee hedduu gumaachuun addunyaa har’a arginu tana uumuu keessatti shoora olaanaa taphateera;taphachaas jira.
Kanneen keessaa sirnii Gadaa angafa; sirnii Gadaa fi uummannii oromoo qubaa fi qubeedha; adda hin bahan. Dhiitee-bariitee uummata oromooti: jiruu jireenya, aadaa fi duudhaadha, seera ittiin bulmaataati, calaqqee fi riqicha eenyummaa sabaa dhalootaa dhalaatatti ceesisuudha.Kalaqa sirna Gadaa keessatti uummannii oromoo rakkoo gara fuulduraatti mudachuun sirna kanaaf balaa taa’u dandeettuu raaguun furmaata mataa isaa kaa’aa ture. Rakkoowwan yeroo sun raagamanii furmaannis kaa’ameef keessaa tokko rakkoo jijjiirama maqaa oromooti. Akkuma raagame rakkoon jijjiirama maqaa muudachuun dhaloota qubee waliin wal’aansoo qabaa jirti. Sirnii gadaa garuu waggoota kumaatamaan laakka’aman dura furmaata kaa’e. furmaata akkami? Obsaan dubbisaa,….
Gaaddisa sirna Gadaa kana jalatti iccitiin uummannii oromoo madaala eenyummaa isaa cabaa cabaaluqa irraa eeggateenii dhalootaa dhalootatti dabarsaan ture keessaa tokko Gubbisa/Moggaatii. Gubbisii sirna moggaasa maqaa(Maq-baasa) dhiiraati, keessattuu ilma angafaa. Moggaatiin ammoo sirna moggaasa maqaa dubartii fi ijoollee maandhaa(quxxisuuti). Sirnii kun keessattuu Gubbisii jila(ayyaana) guddaa hawwii guddaan eegamu yoo ta’u ijoollee waggaa sadii hanga shanii jiraniif raawwatama. Umriin gubbisnii itti raawwatamu caasaa sirna Gadaa Ilmaan kormaa fi Ilmaan Jaarsaa jedhaman jidduutti garaagarummaa qabaatullee yeroon isaa ji’a Caamsa keessa ykn Wacabajjii ykn Oborraa guddaa keessa. Sirnii gubbisaa walii galatti hanga guyyaa shanii kan fudhatu yoo ta’u sirnoota akka Mukaa-Buuyyoo,Guyyaa Galmaa,Qootii fuudhuu, Maq-baasa, Handhuraa,Dhaanee fi kkf of keessaa kan qabu yoo ta’uu sirna baay’ee bal’aa fi wal xaxaa waan ta’eef guutummaa isaa yeroo biraa kan itti deebinu ta’a.
Har’aaf falaasamoota sirna kan keessatti raawwatan keessaa falaasama sirnii gadaa oromoo eenyummaa oromoo eeguu fi mirkaneessuu keessatti ga’ee bakka hin bu’amne taphachaa akka ture agarsiisu tokko haa ilaalluu. Innis Sirna Gubbisaati. Sirna kan keessatti wantoota raawwataman keessaa tokko moggaasa maqaati;maqaa haaraa. Mucaan maqaan moggaafamuuf kun kanaan dura maaliin waamamaa ture jechuu ni dandeessu. Maqaan lamattuu jira keessattuu Oromoo Booranaa biratti hanga ammaatti namnii kamiiyyuu maqaa lama lama qaba: Maqaa ijoollumaa( Maqaa Xiqqaa) fi Maqaa Guddaa( maqaa Gubbisaa ykn Moggaasaa) jedhamu. Maqaan ijoollumaa kan guyyaa dhalootaa irraa kaasee maatiin,firaa fiixaa fi ollaan daa’ima dhalateen waamuudha. Kunis fakkeenyaaf amalaa fi bifa daa’imaa irratti hundaa’uun Carfii,Dhibaa,Buttee fi kkf. Maqaan Gubbisaa ykn Moggaasaa ammoo of eegannoo cimaadhaan moggaafama. Maqaan Gubbisaa Manguddoon kan moggaafamu yoo ta’uu maqaa qajeelaa kanneen akka Waaqo, Galma, Boruu, Liiban, Guyyoo fi kkf ta’uu danda’a. Hunda caalaa kan nama ajaa’ibu garuu maqaan Gubbisaa ykn Moggaasaa kun maqaa duraan jiru qofa irraa moggaafamuu isaati. Maqaan Gubbisaa maqaa afaan biraa osoo hin dabalatin maqaa duraan oromoon baafatee ittiin waamamaan ture qofa keessaa filatamee moggaafama. Yeroon maqaan akaakuu (akaakayyoo) ilmaaf moggaafamus ni jira. Kunis yommuu ilmii angafaa osoo akaakuun isaa lubbuun jiruu dhalateedha. Fakkeenyaaf, Liiban Jaldeessa Liiban ta’uu ni danda’a. Maqaan ijoollumaa maqaa namoonnii dhuunfaa ilaalcha isaanii ibsachuuf baasan waan ta’eef yeroo baa’yee maqaa gubbisaa keessatti hin filatamu. Maqaa duraan hin beekamne baasuu fi maqaa afaan biraa baasuun aad-malee;hin danda’amus. Sababnii isaas dirqama maqaa duraan jiru kan ulaagaa maqaa Gubbisaa guutu keessaa filatama waan ta’eef. Haala kanaan uummannii oromoo eenyummaan isaa akka hin boorofne dhiibbaallee karaa addaa addaa dhufan irraa tikfatee har’a akka maqaa abbootii keennaatiin waamamnu nuu taasiseera. Haa ta’uu malee sirnii maq-baasaa kun oromoo Booranaa biratti akkuma itti fufetti jiraatullee oromoon biroo biratti bifa qindaa’een geggeeffamaa waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu dhalootii qubee kun waan kana quba qabaatee haa barbaaduun dhaamsa eenyummaati.
← Gooticha Oromoo Badhaadha Dilgaasaa (Miidheee) Badhaadha Dilgaasa (Midhe)-Oli See You Salale
ANATU KEETI!-(OROMIYAA………!) ANI ANUMA! →